KOMBUTER "IFH 1000": DIB U EEGISTA, SHARAXAADDA ASTAAMAHA IYO TILMAAMAHA ISTICMAALKA - KUFSI
Kufsi waa geedi socod kakan, guusha ay ku xirantahay arrimo badan. Beeralayda ku hawlan hirgelinta shimbiraha beeraha waxay muddo dheer ku guuleysteen qalab casri ah oo leh nidaamyo xakameyn toos ah oo ah xuduudaha ugu muhiimsan ee embriyaha. Mid ka mid ah aaladahaas - kobcinta "IFH 1000". Qiyaastii tirada ukunta ee lagu rakibi karo mashiinka, waxay leedahay magaciisa, iyo qalabka laftiisa, faa'iidooyinkeeda iyo faa'iidooyinkeeda, akhriso alaabtayada.
"IFH 1000" waa weel wax lagu toosiyo oo leh albaab dhalo. Kiniisada waxaa loo isticmaalaa in lagu kululeeyo ukumaha shimbiraha beeraha: digaagga, shimbiraha, berriga.
Soo saaraha qalabka - software "Irtysh". Badeecadu waxay leedahay xuduudaha u oggolaanaya in ay ka shaqeeyaan aag kasta oo cimilada ah. "IFH 1000" waxay ku haboon tahay in lagu shaqeeyo meelaha bannaan oo leh heerkul ah min +10 ilaa +35 digrii, qoyaanka hawada 40-80%. Waad ku mahadsantahay kuleylka kuleylka kuleylka ah, waxay ku hayn kartaa heerkulka ilaa 3 saacadood.
Sidoo kale, "IFH 1000" waxaa lagu qalabeeyaa shaqaale gaar ah - qaylo-dhaan ayaa ka baxaya marka ay jirto koronto-gaaban ee ku-oolka. Muddada shardiga - 1 sano.
miisaanka - 120 kg;
dhererka iyo ballaadhku waa siman yahay - 1230 mm;
isticmaalka korontada - wax ka badan 1 kW / saac;
qoto dheer - 1100 mm;
qiyaasta qiyaasta - 200 V;
qiimihiisu yahay -1000 watts.
Waa muhiim! Qalabka qaboojiyaha waxaa lagama maarmaan ah in lagu shubo oo keliya biyaha la bakhtiiyey ama la kariyey. Biyaha adag waxay dhaawici karaan nidaamka qoyaanka..
Waxaad ku dhejin kartaa ukun ku dhejinta noocaan:
ukunta digaaga - 1000 gogo '(iyadoo la siinayo miisaanka ukunta aan ka badnayn 56 g);
duck - 754 gogo ';
Goose - 236 gogo ';
boodhadh - 1346 gogo '.
Si aad u dooratid kulubka ugu fiican ee beeralayda, waxaan kugula talinaynaa in aad barato faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka kale ee noocyada kale: Stimulus-1000, Stimulus IP-16, iyo Remil 550CD.
Isku-xidhkaani waa mid isku dhafan. Horumarinta ayaa hubiyay in geeddi-socodka wacyi-gelinta uu ahaa mid fudud oo cad oo macquul ah. Farsamada "IFH 1000" waxay leedahay fursadaha soo socda:
xakamaynta tooska ah ee heerkulka, qoyaanka iyo ukunta;
xuduudaha loo baahan yahay waa la geyn karaa gacanta ama laga soo xulaa xusuusta qalabka;
haddii ay dhacdo wax guul darro ah ee nidaamka, sirenka dhawaaqa ayaa loo hawlgalaa;
Waxaa jira hab xeeladaysan oo gaaban - hal mar saacaddiiba. Marka qulqulka, xaddidan waxaa loo sameyn karaa gacanta;
interface ah oo kuu ogolaanaya inaad ku xirto qalabka kombiyuutarka iyada oo loo marayo dekedda USB iyo abuurista xog shakhsi ah oo leh xaddidaadyo isugeyn ah noocyada kala duwan ee shimbiraha;
Ma taqaanaa? Ukunta qamriga waa in la kariyaa ilaa la diyaariyo ugu yaraan laba saacadood.
"IFH 1000" waxay leedahay faa'iidooyin badan:
Heerka qoyaanka ee qolka waxaa lagu hayaa iyada oo la adeegsanayo algorithm soo fiicnaaday: marka laga reebo balaayada biyaha, qoyaanka waxaa lagu xakameynayaa iyada oo loo marayo biyaha cirbadaha;
geedi socodka xakamaynta geeddi-socodka ayaa sahlaya nalalka kamaradda;
Helitaanka qolka kuleylka ee nadiifinta iyo fayodhowrku waa mid ku haboon sababtoo ah habka la kala saari karo ee loo rogi karo taantiyada;
helitaanka golaha wasiirada, kaas oo fududeeya habka nadiifinta iyo jeermi-dilista (dhammaan qashinka isku uruuray hal qol).
Dhibaatooyinka ka yimaada qandaraaska waxaa ka mid ah:
Qiimaha sare ee qalabka;
baahida loo qabo badalida bambooyin badan;
suufiyada yaryar, kuwaas oo si joogto ah looga baahan yahay inay ku daraan biyo;
Heerka sare ee dhawaaqa;
dhibaatooyinka xagga gaadiidka.
Inkastoo xaqiiqda ah in damaanad-bixiyaha uu ku kobcayo "IFH 1000" waa hal sano oo kaliya, iyada oo la bixinayo iyada oo la raacayo dhammaan sharciyada lagama maarmaanka ah, qalabku wuxuu socon karaa toddoba ama in ka badan.
Daar "IFH 1000" shabakadda.
Daar heerkulka hawlgalka oo qalaji qalabka ilaa laba saacadood.
Ku rakib shaanbooyinka oo ku buuxi biyo kulul (40-45 digrii).
Ku xir maryaha qoyan ee dusha hoose iyo ku dheji dhammaadka biyaha.
Isku hagaaji heerkulka iyo qoyaanka hawada ee ku xeeldheer adigoo isticmaalaya kontoroolka fog.
Ka dib markaad geleyso xuduudaha hawlgalka ee IFH 1000, bilaw inaad gawaarida qaadatid.
Waa muhiim! Dhamaadka marxaladda wareegga marxaladda, qalabka waa in si fiican loo dhaqo. Sidoo kale waa suurad wacan in la hirgeliyo qalabka iyada oo xal of potassium permanganate.
U fiirso xeerarka soo socda markaad ukunaynaysid:
taangiyada waxaa lagu rakibay boos jilicsan;
ukumaha waa in la xakameeyo;
digaagga, duurjoogta iyo turkika turkika ah ayaa la dhigayaa dhammaadka afkiisa, goose - horizontal;
muhiim maaha in ukumaha la isku daro unugyada iyadoo la adeegsanayo warqad, filim ama waxyaabo kale, tani waxay keenaysaa khalkhalka wareegga hawada;
gawaarida ku rid sheyga qaab-dhismeedka illaa uu joojiyo
Baro sida loo nuugo ukumaha ka hor inta aanad ku dhicin masiibada.
Ka hor inta aan la saarin ukumaha waa in lagu hubiyaa baaritaanka.
Inta lagu jiro xilliga xaddidaadda, waxaa lagaa doonayaa inaad sameyso waxyaabaha soo socda:
Isbedelka heerkulka iyo qoyaanka inta lagu jiro xilliyada kala duwan ee maskaxda;
biyaha ee suuqyada muddada wareegista waa in la baddalaa 1-2 maalmood oo kasta, inta lagu jiro muddada ka-noqoshada - maalin kasta;
inta lagu jiro mudada wareegista oo dhan waxaa lagula talinayaa inay si joogto ah u bedelaan baayacmushtarka meelaha;
goosta iyo ukunta duurjoogta xilliga kulaylku waxay u baahan yihiin qaboojiye xilliyeed - albaabbada 1-2 jeer maalintii waa inay furan yihiin dhowr daqiiqadood;
jooji tufaaxyada, iyaga oo ka dhigaya meel siman, waa inay noqotaa maalinta 19aad ee ukunta digaaga, maalinta 25aad ee ukumaha duurjoogta iyo turkiga, maalinta 28aad ee ukunta goose.
Ma taqaanaa? Balut - ukun duur la kariyey oo leh miro la dhajiyay oo leh roodhid, balaash iyo carjubaan ayaa loo tixgeliyaa xasaasiyad Cambodia iyo Filibiin.
In nidaamka chicks chicks raacaan talooyinka soo socda:
saaro qashin-qubka ka soo jeeda tufaaxa (ukunta aan ceelka lahayn, bout);
Ku rid ukunta ugxantiisa adigoo ku daboolaya saxaarada sare;
Sameynta saamiyada yaryar waxaa lagu fuliyaa laba tallaabo: ka dib marka la soo saaro dufcada kowaad, ka saar qashinka la qalajiyey oo gawaarida ku rid qolka qolka dhererka;
ka dib marka la barbardhigo dhammaan bambooyinka, waa in lagu dhaqo oo la nadiifiyaa: ku dhaq biyo saabuun leh saabuun, ka dibna nadiifi, qalaji aaladda adigoo gaabinaya shabaqa.
Kharashka "IFH 1000" waa 145 000 roon, ama 65 250 hryvnia, ama 2 486 dollars.
Inkasta oo ay jiraan cilladihii qalabka iyo IFH 1000 (badiba iibsadayaasha ayaa tilmaamaya rinjiyeynta tayada liidata ee wax soo saarka, taas oo si buuxda u foorarsata ka dib marka la isticmaalo, iyo tayada tayada liidata), kaniubadani waa xalka wanaagsan ee beeraha digaaga ee beeraha. Marka la barbardhigo shisheeyaha ajnabiga ah, faa'iidada shakiga ah ee qalab gudaha ah waa mid fudud ee dayactirka iyo dayactirka - soo-saaraha si buuxda u bixiya dayactirka iyo bedelida qeybaha kiisaska damaanad qaadka.
Wixii xilli ciyaareedkii labaad ee isticmaalka IFH-1000, afgambi ayaa dillaacay. Intaa waxaa dheer, in kiniisada horay loo soo dhejiyey, oo leh ukun. Wuxuu u jeedaa midigta, laakiin ma rabo dhinaca bidixda. 4 saacadood kasta waa inaad u tagtaa qalabka wax lagu daboolo oo aad u rogto badhamada gacanta bidix.
Waxaa loo keenay isbitaallada IFH-1000 ee turkey. Waxay ku dhejisay 500 diyaaradood, oo ka baxday 75%. Intaas ka hor, broiler ayaa la kululeeyay, culays buuxa, soo saarey 70%, inkastoo ukuntu ay ahayd mid tayo badan. Guud ahaan, khubaradu waa ku faraxsan yihiin. Waxaan isku dayey hababka isugeynta: "digaag", "goose", "broiler". Sababtoo ah dhibaatooyinka, sahayda yaryar, biyaha ayaa si degdeg ah u baxa, iyo si loo kiciyo, waa inaad soo jarto masraxa, haddii kale qaylo-dhaanta "qoyaan la'aanta" ayaa kicinaysa kaddib marka la furo albaabbada qalliinka. Laga yaabe, inaysan jirin kulubo wax ku ool ah, hase yeeshee kulankan ayaa shaki ku jiri doona kharashkiisa.